I-China 3ML ISILIVA IMIBALA YEBHAYIBHILE YENKQUBO YOKUGQIBELA YENKQUBO YOKUGQIBELA YENKQUBO YOKWENZA IMveliso kunye neFektri | I-Easypack
Kukho iintlobo ngeentlobo zeebrashi ezikhoyo, ezinje ngeenxa zonke okanye intonga ethe tyaba ene-bristles yenylon ecacileyo okanye emnyama, kwaye ungasifaka kakuhle isikhonkwane sezikhonkwane kwizikhonkwane zakho ngomzuzu omnye.
I-Easypack Glassware ivumela bonke abathengi ukuba baodole iisampulu zasimahla. Ukuba ufuna ngokwenene ukupakishwa kwethu ngobuninzi, siya kukubonelela ngokuzenzekelayo ngesaphulelo esikhulu kwinqanaba lokuphuma. Sincoma ukuba bonke abathengi bavavanye imveliso ngaphambi kokufaka iodolo. Oku kuqinisekisa ukuba iiglasi zethu ziyahlangabezana neemfuno zakho ngaphambi kokwenza utyalomali olukhulu. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso zethu, nceda unxibelelane nathi mahala!
Iibrashi ezahlukeneyo kunye nokutywina kuyafumaneka
I-DuPont Nylon Brush: I-Round okanye i-Flat Stick eneenwele ezicacileyo okanye eziMnyama
EPE Liner ukutywina.
Ukutywinwa kwePlagi yePlastiki.
Ibhotile: Isoda iLime iLitye
Intonga yebrashi: PE
IBristles: iDuPont yeNylon
Ukutywinwa kwePlagi yePlastiki: PE
Ukutywina iWad: EPE
Zonke izinto ezihambelana neziqinisekiso zeSGS.
Egqithileyo Iibhotile zeglasi ezenziwe ngebhotile ye-5ml ebomvu ebomvu kunye nesiciko sesinyithi kunye nebrashi
Okulandelayo: 10ml 15ml isilinda imilo iglasi isiqhumiso elula ibhotile kunye nempompo yegolide zokutshiza
Nail engenanto iibhotile Polish ethengisa
Nail iibhotile zasePoland ezingenanto ngeBrashi
I-Glass Nail iibhotile zasePoland
I-Nail Bottle engenanto engenanto
Engenanto Nail Glass Glass iibhotile kunye oonobumba kunye B ...
15ml abamnyama camera iglasi isikhonkwane ibhotile nge ...
5ml ebomvu ibhola camera imilo iglasi isikhonkwane ipolishi bot ...
Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Sula iibhotile Pump Pump, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo,